Akụkọ - Ndị na-emepụta ụdọ mmiri na-ekekọrịta mmeghe nke ịzụ ụdọ mọsel
Ndị na-emepụta ụdọ mmiri na-ekekọrịta mmeghe nke ịzụ ụdọ mọsel
Mgbe a na-akụ mkpụrụ osisi mọsel, ha nwere ike ịhọrọ mpaghara ebe ọkwa mmiri dị ntakịrị, ka àgwà mmiri wee pụta ìhè.Mgbe àgwà mmiri ahụ doro anya, ọ ga-adaba adaba maka isi njikwa na ileba anya nke àgwà mmiri. Enwere ike idozi eriri mariculture n'etiti etiti ahụ dum, wee tinye akara na akara.Ozugbo ọkwa mmiri na-agbanwe, mmiri ahụ nwere ike ịga n'ihu na-ebili ozugbo na ebe a kara akara, na omimi nkịtị kwesịrị ekwesị maka ọrụ ugbo. N'oge okpomọkụ, ihe dị ka 30 centimeters mmiri kwesịrị ekwesị, na n'oge oyi, ihe dị ka 40 centimeters kwesịrị ekwesị.
E kwesịkwara idozi eriri ọ bụla na njupụta nke ihe ọkụkụ ga-aṅa ntị na ya.N'ụzọ bụ isi, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị inwe mọsel 6 na eriri ọ bụla.Ọtụtụ mussels adịghị akwalite uto. N'ozuzu, ogologo ogologo nke eriri ga-adabere na njupụta nke omenala, na oghere nke eriri ọ bụla kwesịrị ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya iji zere njikọ dị n'etiti ụdọ mariculture na eriri. , nke na-adịghị emetụta uto ha. E nwekwara ọtụtụ uru na ọghọm dị na usoro a nke ịkụ ụdọ.Uru dị na ya bụ na ndị ọrụ ugbo nwere ike ịhazigharị omimi nke ịkọ ihe n'ọchịchọ dị ka oge na-agbanwe agbanwe si dị, ka mọsel wee too nke ọma.
N'ikwu ya n'ụzọ ndị ọzọ, ụdị aquaculture a, chọrọ nke mmiri ga-adịtụ-emighị emi, na ọnọdụ nke aquaculture ga-adịtụ mfe, ihu ọma ndị ọrụ ugbo chọrọ ime nwere ike. Dị ka ogologo dị ka eriri na-wetara elu ozugbo, na enwere ike ịrụ ọrụ ugbo.Nlekọta kwa ụbọchị dịkwa oke mkpa.E jiri ya tụnyere ụzọ ndị ọzọ, ọrụ ugbo dị mfe na ụgwọ ọrụ na-ebelatakwa n'ụzọ bụ isi. Otú ọ dị, ụzọ ọmụmụ a nwekwara ihe ndọghachi azụ, n'ihi na nkwụsi ike ya adịghị mma, na clams na eriri na-enwekarị ihe ize ndụ nke ịdaba.Ozugbo ọdịda mere, ọ ga-abụ nnukwu mfu nye ndị ọrụ ugbo.
Aro sitere n'aka ndị na-emepụta ụdọ mariculture: na ụfọdụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị oke egwu, nguzogide mussels na ọdachi dị iche iche dị ntakịrị, ya mere, mgbe ụfọdụ anụmanụ ndị na-eri anụ na-apụta, ọ dị mfe ịkụ na emetụta ya. Karịsịa mgbe enwere ụfọdụ nje n'okpuru mmiri. mọsel abụghị ikike nguzogide ọ bụla, naanị nwere ike ikwe ka nje ndị a jiri nwayọọ nwayọọ mebie onwe ha, na-ebute mmetụta dị ukwuu na ịmụ nwa.
Oge nzipu: Jul-09-2021